Wax Yabaha Hooyada Uurka leh Ka Cabato |
Abshiro Axmed Cabdi — June 8, 2019
Wax Yabaha Hooyada Uurka leh Ka Cabato!
Hooyada uurka leh waxay ka cabataa Calaamado badan. Waxayaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah:
Hooyada uurka leh waxay had iyo jeer dareentaa daal aan dhamaneyn.
Daalka hooyada waxaa loo kala saaraa labo qeybood:
Daal caadi ah: waa daal hooyo kasto uur leh wey dareentaa waxayna ka fiicnaantaa markay qoraxdu soo kululaato.
Daal ay wehliso Daciiftinimo:
Hooyadu waxay dareemee daal saa’ id ah iyo tamardaro kuwaas oo tusaale unoqon karo in hooyada cuduro jirkeed ku jiraan sida in hooyada dhiig la’aan tahay.
Qoyaan ka imaado Siilka*Vagina
Qoyankaan waa qoyaan caado u ah hooyo kasto oo uur leh gaar ahaan bilaha danbe. Qoyaanku waxuu noqon kara Mid nadiif ah oo biyo ah ama waxuu noqon karaa mid Jaale ku xigeen ah waa caadi. Laakiin hadii qoyaanku yahay Mid wasaq ku dheehantahay cun-cuna wato waxaa jiri karo Yeast infection.ee waa in hooyadu ispitaal aado. Yeast infectionka waxuu lee yahay qoyaan saa’id usoo urayo. Hooyadu hadaysan iska daweyn waxay sameyn ku yeelan kartaa xiliga Foosha.
Hooyada waxaa lagu arkaa matag iyo lalabo xiliga ay ku jirto bilaha hore Mataga ayaan loo heyn sabab cad lakin Dhaqtar yaash qaar ayaa ku tilmaamo Isbadalka Hormonada hooyada.
Hooyada waxaa lagula taliyaa:
In ay Qaadato Cunto Protien leh intay san seexan ka hor sida Cheeska ama Loos.
Markay soo kacdo in ay qadato Cuntoyinka qalalan sida Rootiga.
In ay cuntiyinka u qaadato saacad kadiba xoogaa qadato.
Sido kale waa in hoyadu biyo cabaasha badsato.
Jamashadu waa wax hooyadu jeclaato. Una qaadeyso jeceyla badan. Waan wax aan faa’ido u lahayn. Lagana yaabo in mararka qaar qatar u keenaam.wax yaalaha hooyadu jatamatu waxaa ka mid ah Barafka, Dhuxusha, Carada. Halka hooyoyinka qaar ay jantaan Maro, kabo ama dahab.
Waxuu kamid yahay wax yaalaha hooyadu ka cabato. Waxaa sababo Hormonka postrogen. Postrogenku waxuu qaabilsan yahay in uu minka kala baxo.Si uu cunigu u helo boosa weyn. Kalabaxaasa iyo koritaanka cuniga ayaa cadaadis saarayo caloosha. Caloosha waxaa laga helaa Acid. Acidkaasa ama cuntadi ay cuntay hooyada ayaa waxay dib ugu soo labanayaan Hungiri Mareenka.taasina waxay dhalinee qaarjeex.
Waxaa looga hortiga karaa labo mid:
In hooyadu aysan hal mar cunto badan qaadan oo ay Saacado kadiba xoogaa qaadato.
In aysan seexan markay cunto soo cunto ay sugto intii cuntadu ku dagayso.
Waa labada ugu muhiimsan. Kuwo kale wey jiraa.
6. Isbadalka Naasaha
Naasaha waxaa ku imaanayo isbadal weyn maxaa yeelay waxaa la soodaynayaa hormonka qabilsan caanaha waxaaun diyaarinayaa caanihii.
Hooyadu waxay dareemee xanuun iyo dan qasho, waxaa naaska ibtiisa fuuleyso qolof maxaa yeelay waa daboolka Naaska oo caanaha celinayay.
Hooyada waxaa lagula taliyaa in aysan xoqin oo aysan qaadin qolaftaasa.
Bilaha danbe waxaa ladiyaariyaa caanaha danbarka ku waasoo cuniga wax badan u faa’ideynayo.
Tags: Wax Yabaha Hooyada Uurka leh Ka Cabato
Next post Xeer Waa Xakame
Previous post Waa Maxay Kolba’aariyo, Sideena Loo Daaweyn karaa?